FJKM Ankadifotsy Mana isan'andro / Soratra Masina / Accueil - FJKM Ankadifotsy
Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8
Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo
I Mpanjaka 10.1 - 29 / FAHALEHIBIAZANA TSY MANAN-TSAHALA
I Mpanjaka 10.1 - 29&nbsp; F.2FAHALEHIBIAZANA TSY MANAN-TSAHALAFitsidihana ara-panjakana (1-13). Na dia hitsapàna ny fahendren'i Solomona aza no anton'ny famangiana (1), dia tena mendrika fitsidiham-panjakana i...
I Mpanjaka 9.15 - 28 / NY ASA FANANGANANA
I Mpanjaka 9.15 - 28&nbsp; F.6NY ASA FANANGANANAFandaminan'asa.&nbsp;Tsy kilalao na sangisangy ny zavatra notanterahina eto fa tena asa goavana be (ny tranon'i Jehovah, ny lapan'andriana, ny manda, sns…). E...
I Mpanjaka 9.1 - 14 / VALIM-BAVAKA
I Mpanjaka 9.1 - 14&nbsp; F.2VALIM-BAVAKARen'Andriamanitra.&nbsp;Nitalaho mafy Solomona hoe "mba henoy re ny fitarainana sy ny fivavaka ataon'ny mpanomponao" (8.28). Eto amin'ity andalana ity no ahitantsika...
1 MPANJAKA 9.1-14. / VALIM-BAVAKA
VALIM-BAVAKARen’Andriamanitra. Nitalaho mafy Solomona hoe “mba henoy re ny fitarainana sy ny fivavaka ataon’ny mpanomponao” (8.28). Eto amin’ity andalana ity no ahitantsika fa ren’ny Tompo ny fangatahany (3), ka ma...
1 MPANJAKA 8.54-66.
FITAHIANA MITONDRA FIFALIANATso-drano (54-61). Fisaorana sy fankasitrahana an’Andriamanitra no nanombohany izany satria nisy ny fitsaharana teo amin’Israely ary ny teny soa nolazainy tamin’i Mosesy dia tanteraka (5...
1 MPANJAKA 8.41-53. / FITAHIANA MITONDRA FIFALIANA
VAVAKA FAMINANIANAHo an’ny vahiny (41-53). Mivavaka ho an’ireo vahiny izay avy hanatona an’i Jehovah Solomona. Ny Baiboly koa milaza vahiny samihafa nanompo an’i Jehovah. Ohatra : Namana syriana (2 Mpanjaka 5), Rot...
I Mpanjaka 8.22 - 40 / MAMALIA NY VAVAKA ASANDRATRA ETO
I Mpanjaka 8.22 - 40&nbsp; F.2MAMALIA NY VAVAKA ASANDRATRA ETOFiderana.&nbsp;Manohy ny tso-drano i Solomona. Mameno ny vavaka ataony hatrany ny fiderana, ny fiaikena ny fahalehibiazan'Andriamanitra satria t...
I Mpanjaka 8.1 - 21 - FITOKANANA NY TEMPOLY
I Mpanjaka 8.1 - 21&nbsp; F.2FITOKANANA NY TEMPOLYAmpiakarina ny fiara.&nbsp;Miara-mientana ny rehetra amin'ny fampakarana ny fiaran'ny fanekena. Io no fanaka sarobidy indrindra sady maha-izy azy ny tempoly...
I Mpanjaka 7.13 - 51 : NY SAFIDY TSARA
I Mpanjaka 7.13 - 51 &nbsp;F.2NY SAFIDY TSARARehefa vita ny fanaovana ny lapan'ny mpanjaka, dia niverina tamin'ny Tempoly indray Solomona mba hijery ireo fanaka hatao ao anatiny. Nankininy tamin'i Hirama avy an...
I Mpanjaka 7.1 - 12
I Mpanjaka 7.1 - 12&nbsp;F.2NY AN'ANDRIAMANITRA ALOHATamin-kafanampo sy fahendrena no nanorenan'i Solomona ny Tempoly ho an'Andriamanitra, izay nananany fifandraisana akaiky tokoa. Fito taona no nanatanterahany...
1 ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203
Lahatahiry 2018 (Annuaire professionnel)
Hainao ve ?